War Deg Deg Ah: Faysal Cali Oo Xisbiga Ucid Wareejinaya Iyo Cida U ku Wareejinayo Iyo Cidda Ka Danbeysa Inu Wareejiyo - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: Faysal Cali Oo Xisbiga Ucid Wareejinaya Iyo Cida...
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee xisbiga ucid ayaa sida aya wararku nagu soo gaadhayan waxa ay sheegayn inu guddoomiyaha xisbiga ucid ku wareejinayo mid ka mid ah beelaha dhulbahanta oo ku sugan caasimada Hargeysa oo dhawaan ka soo degay Somaliland oo hore u ahan jiray ninki ugu mucaaridsana kooxda Khaatumo
Sida ay wararku sheegayan waxa ka danbeyey inu faysal cali waraabe Guddoomiyaha Xisbiga Ku Wareeji Wasiirka Madaxtooyada Jsl Iyo Pro Cali Khaliif Galaydh
sida aay wararku nagu soo gaadhayan faysal cali waraabe ayaa qaatay qadar lacag ah oo dhan 87 milyan oo dooller oo u bixiyey Wasiirka Qasrigga Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi
Sida Kalan Pro Cali Khaliif Galaydh aya Aaman Kula Dul Dhacay Faysal Cali Waraabe Iyo Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi
Pro Cali Khaliif Galayr oo ah Hogaamiyaha Khaatumo, aya ka war baxiyay dadka Degaanada Laascanood Iyo Buuhoodle inay Tabasho badani Jirtay, oo ay dareemayeen inaanay ka Mid ahayn Dowlada Somaliland, laakin beryahan uu dambeysay dedaal badan uu sameeyay Wasiirka Madaxtooyada Md Maxamoud Xaashi Cabdi aad Moodid ino Nidaamki Nabadaynta Dadka Degaanadaasi iyo Horumarinta Ummada Ku dhaqan Laascanood Iyo Buuhoodle ino Dedaal badan ka qaatay, socdaalkiisi Iyo Shirarki uu qabtay Beelaha ku dhaqan Degaanadaasi waxu sheegay inay Isbedel weyn ka keentay.
Pro Cali KHaliif aya si gaar ah ugu mahadnaqay dedaalka uu Wasiirka Madaxtooyada Md Maxamoud Xaashi cabdu uu Ka Muujiyay Iso soo jiidida Dadka degaanadaasi iyo Xukummada Somaliland ee uu Hogaaminayo Md Axmed Silaanyo.
Waxu geesta kalena amaan uu jeediyay Eng Faysal Cali waraabe oo Ku tilmaamay Ma Daale uu halgamaya qaranimada somaliland, oo isna dedaal badan ku baxiyay sido anaka oo ah Khaatumo iyo dhamaan dadka Degaanadaasi iskugu soo dhoweyn laha Xukummada, waxaanan odhan karna Faysal cali waraabe waa ku Guulaystay.
Hogaamiyaha Khaatumo aya amaan badan uu jeediyay Labadaas masuul iyo Masuuliyin badan oo ku tilmaamay inay ahaayen dadki ka dambeeyay inan maanta magaaladayga Hargeisa joogo.
Haba Cali Khaliif aya isagu maalmahanba Kulamo Kala Dowan La Qaanyey qaar ka mid ah madaxda kooxda khaatumo iyo wasiirka madaxtooyada iyo Faysal Cali Waraabe oo in badanbe Isdaba Socdaan
Somalia: Mogadishu car bomb explosion kills 17